Safal Khabar - यौन प्यास मेटाउन वेश्यालय छिरेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमती भेटेपछि...
यौन प्यास मेटाउन वेश्यालय छिरेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमती भेटेपछि...
मङ्गलबार, २६ चैत २०७५, १४ : ०२
कुनै कुनै समाचार त सुन्न पनि नसकिने खालका हुन्छन् । बाबुबाट छोरी बलात्कार भएको समाचार त आइरहेका छन्, जुन सुन्न पनि नपरोसजस्तो लाग्छ । श्रीमतीलाई श्रीमानले बलात्कार गरेको समाचार पनि आएकै हुन् । यस्तै खालको समाचारको भीडमा अर्को समाचार बाहिर आएको छ ।
यौन प्यास मेटाउन वेश्यालय छिरेका श्रीमानले आफ्नै श्रीमती भेटेपछि दुवैलाई कस्तो भयो होला ? अथवा हामी दुवै उस्तै भनेर चित्त बुझाए कि !
समाचार नेपालको होइन, छिमेकी देश भारतको । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने । श्रीमान् यौन प्यास मेटाउन एक वेश्यालय छिर्छ । जुन कोठामा ऊ छिर्छ, त्यो कोठामा यौन प्यासको तीर्खा मेटाउन आउँछिन् एक महिला, जुन महिला उनकै श्रीमती हुन्छिन् । दुवैले एकअर्कालाई हर्दा दुबै झसङ्ग हुन्छन् । लाग्छ, कुनै चलचित्रको कहानीजस्तो तर सत्य हो । समाचार लेखेको हो, भारतीय पत्रिका सुपर एक्सप्रेसले ।
श्रीमानले जहिले पनि अतिरिक्त खर्चका लागि केही पैसा दिन खोज्दा आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको श्रीमतीले बताउने गर्थिन् । यसभित्रको कारण के हो त श्रीमान्ले बुझ्न सकेनन् । श्रीमान् यस्तो धन्दामा लागेपछि श्रीमतीपनि यस्तो पेसामा लागेकी पत्रिका लेख्छ ।
श्रीमतीले श्रीमानलाई रातिराति पार्ट टाइर्म काम गरेको त बताउने गरेकी थिइन, तर वेश्यालयमा काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बताएकी थिइनन् । त्यस रात श्रीमान् चाहिँ रमाइलो गर्न बेश्यालय के पुगेका थिए, श्रीमतीलाई भेट्टाए । पछि सोधखोज गर्दा त उनलाई के थाहा लाग्यो भने, त्यो वेश्यालयका सञ्चालकमध्ये श्रीमती पनि एक रहिछन् ।
श्रीमानले सुपर एक्सप्रेसलाई भने– ‘म त हेरेको हेरै भएँ । पछि बुझ्दा त उनी त्यो वेश्यालयकी सञ्चालिका पो रहिछन् ।’ विगत १४ वर्षसम्म विवाहित रहेका यी दुवैको सम्बन्ध त्यसपछि राम्रो भएन ।
श्रीमानले पारपाचुकेका लागि निवेदन दिएका छन् । बुझ्दै जाँदा उक्त वेश्यालयमा ती युवतीले आफ्नै कलिलो उमेरकी छोरी पनि वेश्यालयमा राखेकी खुल्न आयो । पुरुषले सहनै सकेनन् र सम्बन्ध बिच्छेद गरे । सम्बन्ध बिच्छेदका क्रममा अदालतमा श्रीमानले बयान दिएका आधारमा पत्रिकाले समाचार लेखेको हो ।
अमेरिकासँग बदलामा लिन भारतले अमेरिकी सामानमा कर बढायो
भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको जनाएको छ । अमेरिकाले भारतलाई दिइआएको व्यापार सुविधा...
पेट्रोल खन्याएर महिला पुलिसलाई जिउँदै जलाइयो
भारतको केरलमा एक महिला पुलिस अधिकारीमाथि चक्कुले...
सात महिलाको हत्या गरी लाससँग सेक्स गर्ने पक्राउ
एक ‘सिरियल किलर’ले बिजुलीको बिल चेक गर्ने...
‘सेफ्टीक ट्याङ्की’ सफा गर्दा भारतमा सात जनाको मृत्यु
भारतको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलको सेफ्टीक...